ट्याक्सीभन्दा प्लेन चढ्नु सस्तो ! | Himalaya Post
ट्याक्सीभन्दा प्लेन चढ्नु सस्तो !
Posted by Himalaya Post | २१ भाद्र २०७५, बिहीबार ०७:५१ |
काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सांसद भरतकुमार शाहले उपत्यकावासीलाई ट्याक्सीले ठगिरहेको विषय उठाए । उनले भने, ‘प्लेनले लिने भाडाभन्दा काठमाडौंमा ट्याक्सी भाडा महँगो छ ।’
उनले भैरहवा र धनगढीको जहाज भाडासमेत प्रस्तुत गरेर काठमाडौंको ट्याक्सी भाडासँग तुलना गरे । काठमाडौं देखि भैरहवा १ सय ८५ किलोमिटर जहाजमा ३ हजार रुपैयाँ (प्रतिकिलोमिटर १६ रुपैयाँ) मा यात्रा गर्न सकिने उनले सुनाए । उनका अनुसार काठमाडौंदेखि धनगढी ४ सय ८० किलोमिटर दुरी ६ हजार रुपैयाँमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।
अर्थात् एक किलोमिटरको १२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ ।
०७२ माघ २४ मा सरकारले निर्धारित शुल्कअनुसार ट्याक्सीको एक किलोमिटरको ३५ रुपैयाँ छ । नातपौल गुणस्तर विभागले भने यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेभन्दा एक रुपैयाँ बढाएर ३६ रुपैयाँ लिन पाउने गरी मिटरमा सिल लगाउने गरेको छ ।
विभागले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार ट्याक्सीमा चढनेबित्तिकै मिटरमा १४ रुपैयाँ उठ्छ । प्रतिदुई सय मिटरमा ७ रुपैयाँ उठनुपर्ने हो तर ७ रुपैयाँ २० पैसा उठ्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटक ट्याक्सीले झन मनपरी भाडा लिने गरेका छन् । न्यूनतम भाडा नै ५ सयदेखि ७ सय निर्धारण गरेको छ । विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रका लागि ५ किलोमिटरसम्म ४ सय ८१ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । ५ किलोमिटरभन्दा बढीमा प्रतिकिलोमिटर ६८ रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाइन्छ ।
उपत्यकामा बढीमा १ हजार ५२ रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको छ । तर, विमानस्थलका ट्याक्सी व्यवसायीले मनोमानी भाडा लिने गरेका छन् । – आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
Previousउपत्यकाका तीन स्थानमा अत्याधुनिक पार्किङस्थल बन्ने
Nextनेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै, अर्को चरणमा पुग्न ‘गर या मर’को अवस्था
चितवनमा रंगशाला भत्काउने नेता प्रकाश कँडेललाई नेकपाद्वारा निलम्बन
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १३:३३
सिन्धुपाल्चोकको बराम्ची जलविद्युत आयोजना पुन: सञ्चालनमा
२० मंसिर २०७४, बुधबार १०:३०
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा विज्ञसँग छलफल
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार २०:५१
साबुन पानीले हात मिचिमिची धुने अभियान सञ्चालन
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १९:४३